Astrology – Na Pann San
Na Pann San W | July 20, 2020
ဘယ် အလုပ် နဲ့ကြီးပွား တိုးတက် မလဲ မြန်မာ့ အင်္ဂ ဝိဇ္ဇာ ပညာခန်းလေး ဆိုရင် မမှားဘူးပြော လို့ရသလို လွယ်ကူ ရိုးရှင်းထိရောက်သောနည်းလေး တစ်ခု ဆိုသည် ကိုငြင်းဖွယ်ရာပ င် မရှိနိုင်ရလောက် အောင်ကောင်းမွန်သော ပညာရပ်လေး တစ်ခုဖြစ် ပါတယ် ။ လူတစ်ယောက်မည်ကဲ့ သို့သော အလုပ်အကိုင်မျိုးတွေနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေရရှိစေမလဲ တိုးတက်နိုင်မလဲသိဖို့ဆိုရင်တွက်ချက်နည်းလေးကတော့
Na Pann San W | July 14, 2020
” …အကြွေးပြန်ရနည်း…. ” သင့်မွေးနေ့ နံက် ၉း၀၀ မှ ၁၀း၃၀ နာရီ အ တွင်းပြု လုပ်ရပါမည် ..။ လိုအပ်တာတွေက ကြွေပန်းကန်တစ်ချပ် ။ ဖယောင်းတိုင်၁တိုင် ။ နှမ်းဆီ /သံလွင်ဆီ ။ အိမ်ရိုက်သံတစ်ချောင်း ။ ငရုတ်သီးမှုန့်အနည်းငယ် လိုအပ်ပါတယ်…. ပထမဦးစွာ ဖယောင်းတိုင်
ခုနှစ်ရက်သားသမီး ၁ ပတ်စာ ကံကြမ္မာဟောကိန်း ( ၁၃-၇-၂၀၂၀ to ၁၉-၇-၂၀၂၀ )
တ နင်္ဂနွေ သားသမီးများ အတွက် အစားမှားဆေးမှားဖြစ် တတ်တဲ့ ကာလပါ ခေါင်းတွေ လည်း မကြာခဏမူးနေ တတ်ပြီး သတိမကြာ ခဏမေ့နေတတ် ပါတယ် ကျန်းမာရေး အထူး သတိထားရမည့် အချိန်ပါ ။ ရေလမ်းခရီးရပ်ဝေးမ ထွက်ခွာသင့် ပါ ချစ်သူ ဘဝရက်ရှည်ကြာသူများ မင်္ဂလာအမူပြုရ ပါလိမ့် မည် ထီ၇
ကံအထောက်အပံ့ ” ငွေကြေးလာဘ်ရွင်အောင် ကြာသ ပတေးနေ့တိုင်း ပြုလုပ် ရမည့် ယတြာ “
Na Pann San W | July 8, 2020
ကြာ သပတေးနေ့ ညနေ (၆) နာရီ (၄၅) မိနစ် အတွင်း စာရွက် အဖြူ တစ်ရွက်ပေါ် မှာ “ န ” အက္ခရာ ရေးသား ပါ ။ ပြီးလျှင် “န” အက္ခကို ပတ် ၍ “ ဝလုံး ” ရေးသားပါ
တ ကယ် လို့ ခင်ဗျားဟာ လေဓာတ် ရာသီခွင် (မေထုန် ၊ တူ ၊ ကုမ် ) မှာ မွေးဖွား ခဲ့တယ် ဆိုရင် သူဋ္ဌေးကြီး ဖြစ်ဖို့ အခွင့် အလမ်း ပိုများတ ယ်လို့ မှတ်ယူ လိုက် ပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ နှစ်စဉ်